Kulanka Miisaaniyadda: Man City vs Man Utd | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Kulanka Miisaaniyadda: Man City vs Man Utd
Kulanka Miisaaniyadda: Man City vs Man Utd
Posted by: Ahmed Haaddi November 11, 2018
Muqdisho – Mid kamid ah kulamada ugu xiisaha badan ayaa caawa kadhici donna garoonka baaxadda weyn ee Etihamd Stadium, oo ay ku ciyaarto kooxda Man City,kulan ciyaareedka magalaada Manchester loogu magac dhabo,Derby Manchester,kaasi oo caadiyan ay ku bartmaan Man Utd iyo Manchester City.
Haddaba halkaan kaga bogo nuxur waliba oo aad u daawan karto kulankaan.
Wararka Kooxaha ka cusub.
Manchester City ayaan qabin dhaawacyo cusub.
Captain Vincent Kompany iyo daafaca dambeedka midig Benjamin Mendy ayaa dib ugu soo laabanaya kaddib markii laga saaray kulankii Shakhtar Donetsk ee Champions League.
Kubadsameeyaha Kevin De Bruyne iyo goolhayaha labaad ee Claudio Bravo ayaa keliya ka maqan kooxda muwaandiniinta.
Laacibka reer Belgium Romelu Lukaku ayaa ku soo laaban doona Manchester United.
25 jirkaan ayaa seegay safarkii Bournemouth iyo Juventus isaga oo ka cabanayey dhibaato muruqa.
Diogo Dalot ayaa ku maqnaa dhaawac uu soo gaaray intii lagu jiray ciyaaraha heerka caalami, halka kabtanka Antonio Valencia uu ku soo laabtay isagoo u safray magaalada Turin.
Xaqiiqda laga diiwaan geliyey kulankaan.
Manchester City ayaa adkaatay laba kamid ah siddeedii kulan ee ugu danbeysay oo ay la ciyaareen kooxda Manchester United dhammaan tartamada labo barbaro iyo afar qasaaro,tan iyo guulihii afarta ahaa intii u dhaxeysay 2013 and 2014.
Manchester United, ayaa 3-2 kaga adkaatay Etihad xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay,markaasi oo 0-2 laga horumarey.
Red Devils ayaan laga badinin seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay booqdaan Etihad laba guul iyo hal barbaro, iyagoo labo kulan shabaqa ilaashaday.
Pep Guardiola ayaan waligiis qasaarin kulamo xiriir ah horyaalka ee uu gurigiisa ku ciyaarey isaga oo wajahaya hal koox.
Guardiola ayaa badiyay sagaal kulan oo kamid ah 21 kulan oo uu ka horyimid Jose Mourinho tartamada oo dhan todobo barbaro iyo shan qasaaro.
Sergio Aguero ayaa dhaliyay 17 gool waxaana uu sameeyay shan kale oo caawinaad ah,13kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee uu ku heelay Etihad Stadium.
Aguero ayaa dhaliyay 7 gool todobadii kulan ee ugu horeysay ee uu ka hor yimid United, laakiin waxa uu ku guuldareystay in uu shabaqa gaaro seddexdii kulan ee ugu danbeysay.
Raheem Sterling ayaa ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto 12 kulan oo Premier League ah oo uu ka horyimid Manchester United, inkastoo uu isku dayay wadar ahaan 19 darbo.
United ayaa hal kulan kaliya shabaqa ilaashatay xilli ciyaareedkan, waxaana laga dhaliyay 18 gool 11 kulan oo ay ciyaareen.
Red Devils ayaa badin karta seddex kulan oo isku xigta markii ugu horeysay tan iyo a xilli ciyaareedkii hore,markaasi oo ay guuleysteen shan kulan,taasi oo ka mid ahayd kulankii ay guusha 3-2 ah ku gaareen Etihad Stadium.
Tani waxay u noqon doontaa tababare Jose Mourinho kulankiisii 300aad oo uu Premier League tababare ahaan u hogaamiyo. Waxa uu guuleystay 189 kulan tartankaan, isagoo barbaro galay 67 kulan iyo wuxuuna guuldareystay 43 kulan.
Haddii uu Juan Mata gool dhaliyo waxa uu noqon donnaa ciyaaryahanka shanaad ee reer Spain ah oo 50 kadhliya Premier League.
Anthony Martial wuxuu noqon karaa ciyaaryahankii todobaad ee kala duwanaa ee shan kulan oo isku xigta oo Premier League ah gool dhaliya, wuxuuna la siman doonnaa Eric Cantona, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo iyo Robin van Persie.
Previous: Oof-wareen: Aafo ku foollan dadkeenna
Next: Manchester United oo 50 milyan oo ginni ku dooneysa laacib u ciyaara Juventus